Shiinaha Seddex waji oo mitir tamarta korantada rier sidaha, lora, gprs） soo saareyaasha iyo iibiyaasha | Badbaadinta
Saddex-weji afarta-silig / saddex-wajiga-saddex mitir tamarta tamar leh waxay qaadataa wareeg ballaaran oo isku-dhafan waxayna adeegsataa guntinta cabbirka tamarta sareysa. Awoodda isgaarsiinta iyo ku tiirsanaanta moodeelka ayaa sidoo kale gaartay heer codsi wax ku ool ah oo ballaaran. Waxay aqbashaa tikniyoolajiyada sambalka samaynta dhijitaalka iyo habka SMT, waxaana loo qaabeeyey loona soo saaray iyadoo loo eegayo awoodda dhabta ah ee isticmaaleyaasha warshadaha.
1. Dib u dhigista ololka, fududahay in la rakibo
2. Hawlaha cabiraadda tamarta firfircoon & falcelinta, waxay soo bandhigi karaan waqtiga, koodh alaarmiga, iwm.
3. Hawlaha furitaanka diiwaanka daboolka, waxaa wax laga weydiin karaa si looga hortago tuugada korantada.
4. Mitirka Tamarta wuxuu leeyahay shaqada isku-darka tarmada
5. Habka fog iyo habka kontaroolada lacagta gudaha
6. Qaabka hubka: RS485, infrared
7. Waxay leedahay shaqada nadiifinta mitirka, taas oo ku habboon oo la beddeli karo si loo isticmaalo.
8.Maamiyuhu wuxuu ku xiriiraa shabakada korantada iyadoon loo baahneyn in la jiido fiilo kale.
1.Diyaar la muuqaal LCD leh xagal fiirin ballaaran iyo isbarbardhig heer sare ah
2. Isticmaal teknolojiyada wax lagu farsameeyo ee dhijitaalka ah iyo habka SMT.
Sampling-ka loo yaqaan 'Voltage sampling loop' wuxuu adkeynayaa qeybinta voltajarka caabbinta
4.Shaqada ugu weyn: cabirida iyo ogaanshaha, xakamaynta khidmadda fog, shahaadada amniga iyo qaabeynta, soo bandhigida, duubista dhacdada, qaboojinta, waqtiga, soosaarka garaaca wadnaha, iwm.
5. Muuqaalka buluuga ah ee buluuga ah ee Maanganese iyo NB:
Waqtiga xaadirka ah wuxuu kudhacayaa loop leh xariir aad u deggan oo baaxad weyn oo kala jaad ah.
Qaybta NB: Xiriirka isgaarsiinta ee IoT, adeegsiga awoodda hooseeya. Waxay taageertaa isku xirnaanta tayo sare leh ee aaladaha leh shuruudaha isku xirnaanta sare
6. Qaybta Gawaarida: Isagala xiriir khadka isku xirka awooda adigoon u baahneyn fiilooyin dheeri ah.
Mora module: isgaarsiinta isgaarsiinta yar yar ee fogaan-fog.
Mobil GPRS: shabakad dadweyne oo guur-guura (2G network).
7.Card xulashada iyo habka isgaarsiinta: Kaarka CPU / kaararka sirqarinta macquulka / kaarka SD. RS485, infrared, side side power
8.Muuqaalka ciyaarta: isticmaalka korontada isku-darka bisha hadda jirta iyo bishii la soo dhaafay, qiimaha tamar-tirka korontada isku-darka iyo wadarta qiimaha tamar korantada, taariikhda iyo saacadda, koodhka alaarmiga ama xawaaraha, heerka isgaarsiinta, lambarka mitirka mitirka tamarta korantada, iwm.
9. Qalabka mitirka iyo MB module: Cabbirka mitirka waxaa loo isticmaalaa in lagu cabbiro quwadaha firfircoon ee quwada iyo quwadda afarta quwad leh. Sampling-ka loop-ka korantada wuxuu kuxiran yahay kaladuwanaanta voltaatikada.
10.Waaji ikhtiyaar u shaqeeya - wareejin ku dhexdhisan
Nooca tooska ah ee ikhtiyaariga u ah ama nooca helitaanka badalka, nooca ikhtiyaariga-ku-wareejinta ku-dhex-jira
beddelaad ku dhex-socota: tuubbarka wareegga yar ee korantada ku shaqeeya ayaa lagu rakibay mitirka dhexdeeda, oo mitirka la isku daray, faa'iidooyinka: qaab-dhismeed fudud iyo qiimo jaban
11.Sameeka kal-beddelashada-wareegga dibedda
Nooca tooska ah ee ikhtiyaariga u ah ama nooca helitaanka badalka, nooca ikhtiyaariga-u beddelashada dibadda
beddel bannaanka: korantada wareegga mashiinka ayaa si gaar ah loo dejiyaa, mitirka korantada wuxuu xukumaa furitaanka / xiritaanka wareegga korantada dibedda isagoo adeegsanaya marinka kontaroolada
Faa'iidooyinka: goos gooska dibedda, kala go 'xoogan oo hadda jira, ma fududa burburin.
Tixraaca tixraaca 3 × 220 / 380V
Sharaxaadda hada 3 × 1.5(6)A3 × 5(20)A3 × 10(40)A3 × 5(60)A3 × 20(80)A
Heerka saxda ah Heerka Firfircoon ee 0.5, Heerka falcelinta 2, 0.5 sekan / maalin
Awoodda isticmaalka Khadka qiyaasta: <= 1.5W, 5VA; Safka hadda: <1VA
Xaraarada heerkulka Heerkulka shaqada -25 ~ 55degree, heerkulka shaqada ee aadka u sarreeya -40 ~ 70 digrii
Mitirka Constant (imp / kWh) 6400,400,240
Isgaarsiinta RS485: 2400bps Infrared: 1200bps DL / T645-2007
Ku xir mitirka korantada santuuqa mitirka, oo kuxir xiriiriyeha sida ku cad jaantuska fiilooyinka. Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo silig naxaas ah ama terminal naxaas ah. Boolallada ku yaal sanduuqa marinnada waa in la adkeeyaa si looga fogaado gubasho sababtoo ah xiriir xumo ama silig xad dhaaf ah.
Hore: Hal mitir koronto tamar koronto
Xiga: Saddex weji tamar elektaroonig ah
Saddex Mitir Koronto Koronto
Mitirka Tamarta Wejiga Saddexaad
Saddex Wajiga Ic Card Smart Prepaid Energy Meter
Saddex Wajig Kwh Meter
Saddex Wareeg Tamarta Tamarta Smart